फेसबुकमा च्याट गर्न अव म्यासेन्जर एप नचाहिने
फेसबुकमा च्याट गर्न अव म्यासेन्जर एप डाउनलोड गर्न नपर्ने भएको छ । सन् २०१४ मा म्यासेन्जरलाई छुट्टै डाउनलोड गर्न बाध्य पारेर फेसबुकले धेरै प्रयोगकर्ताको मन दुखाएको थियो  । फेसबुक एपमा च्याट गर्ने सुविधा छैन्, यसका लागि छुट्टै म्यासेन्जर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ  । र, यो बाध्यता चाँडै हट्ने संकेत दिएको छ । फेसबुकले आफ्नो एपमै च्याट सुविधा राख्ने तयारी गरिरहेको छ । उक्त कुरा एक एप अनुसन्धाताले फेसबुकले गरिरहेको काम पत्ता लगाएर सार्वजनिक… पुरा पढौ
विश्वभर दुई करोड भन्दा बढीको एउटै पासवर्ड
धेरैजसो मानिसहरु सजिलो पासवर्डको प्रयोग गर्छन् । तर, यस किसिमको सजिलो पासवर्डले साइबर आक्रमणको शिकार हुने सम्भावना बढी हुन्छ । पछिल्लो समय एक अनुसन्धानको दाबीअनुसार विश्वभरका २ करोडभन्दा बढी मानिसको एउटै पासवर्ड प्रयोग गर्छन् । त्यो हो –१२३४५६ । धेरै सचेत बनाउने प्रायासका बीच मानिसहरु सजिलो पासवर्ड राखेर साइबर आक्रमणको शिकार हुने गरेका हुन् । बेलायती साइबर सुरक्षा संस्था एनसीएससीले गरेको अध्ययनमा २ करोड ३० लाख मानिसले पासवर्डमा १२३४५६ को… पुरा पढौ
फेरी पब्जी खेल्ने प्रयास
अनलाइन गेम पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । इन्टरनेट लगायतका माध्यममा अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रतालाई कानूनविना स्वेच्छाचारी ढंगले बन्देज नलगाउन परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भएको हो । मंगलबार अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौड्याल र कानूनका विद्यार्थी विनय रिमालले पब्जीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट… पुरा पढौ
कति छ फेसबुकका मालिकको सुरक्षा खर्च ?
फेसबुकका प्रमुख मार्क जुगरबर्गको सुरक्षामा खर्च ६० प्रतिशतले बढेको छ । जुगरबर्गको सुरक्षाका लागि गत बर्षमात्र २.२६ करोड डलर खर्च गरिएको थियो । करिब २ करोड डलर रकम जुगरबर्क र उनको परिवारको सुरक्षामा खर्च गरिएको हो । २६ लाख उनले प्राईभेट जेट प्रयोगका लागि खर्च गरेका हुन् । जुन रकमलाई पनि उनको सुरक्षा खर्चमा समाबेश गरिएको हो । यसअघि २०१७ मा उनको सुरक्षाका लागि ९० लाख डलर खर्च भएको थियो… पुरा पढौ
सोसाईटी अफ ईन्जिनियरीङ्ग कन्सल्टेन्सी को तालिम सम्पन्न
सोसाईटी अफ ईन्जिनियरीङ्ग कन्सल्टेन्सी (SECON) ले मिति २०७५ चैत्र २७ देखि ३० गते सम्मको सात दिने SAP- 2000 तालिम पोखरा ईन्जिनियरीङ्ग कलेज फिर्केमा पोखरा ईन्जिनियरीङ्ग कलेजका प्रिन्सिपल ई. श्री लेख बहादुर गुरुङ्गको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न गरेको छ । चैत्र ३० गते शनिवार सम्पन्न उक्त तालिममा सोसाईटी अफ ईन्जिनियरीङ्ग कन्सल्टेन्सी (SECON) का पूर्व अध्यक्ष ई.शुरेस प्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल भ्यालुयर्स एसोसियसन पोखरा च्याप्टरका अध्यक्ष ई. राजेन्द्र प्रजूले तालिमको महत्वबारे प्रकाश पार्दे तालिममा… पुरा पढौ
चट्यांकबाट हुने क्षति न्यूनीकरण कसरी गर्ने ? (उपायहरु यहाँ हेरौं)
मौसममा आएको बदलीसंगै प्राकृतिक विपत्ति पनि निम्तिरहेको छ । चट्याङले धमाधम ज्यान लिइरहेको छ । सोमबार अछाम र रुकुममा गरी चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन् । सावधानी नपनाएर समेत यो दुर्घटना बढ्दै गएको निकर्षमा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनले जनाइरहेको छ । निरन्तर चट्याङले ज्यान लिइरहँदा र अंगभंग गराइरहँदा सचेतना जगाउन आग्रह गरिएको छ । चट्याङले बर्सेनी नेपालमा करिब ८२ जनाको मृत्यु हुने गरेको… पुरा पढौ
५० वर्ष पुरानो शुक्रकीटबाट गर्भधारण
अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरूले झन्डै ५० वर्ष पुरानो शुक्रकीटद्वारा भेडामा सफल गर्भधारण गरेका छन् । सन् १९६८ मा चारवटा भेडाहरूबाट लिइएको वीर्यको स्याम्पललाई संसारकै सबैभन्दा पुरानो शुक्रकीटका रुपमा लिइएको छ । सो वीर्यलाई यतिका वर्षसम्म तरल नाइट्रोजनमा माइनस १९६ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गरेर राखिएको थियो । सिड्नी विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले उक्त स्याम्पललाई ५६ वटा स्त्री भेडाहरूमा प्रयोग गरेका थिए र तीमध्ये ३४ वटा भेडाहरूमा सफल गर्भधारण भएको थियो । गर्भधारणबाट जन्मिएका बच्चाहरूमा पनि… पुरा पढौ
अश्लिल कार्यक्रम सञ्चालक पक्राउ
युट्युबमा अश्लिल संवाद र दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग गरी कार्यक्रम उत्पादन र सञ्चालन गर्ने ३ जनालाई प्रहरीले पक्रेको छ । मस्ती टक टाइम नामको कार्यक्रम उत्पादक राजकुमार कुँवर, कार्यक्रम सञ्चालक लक्ष्मी मोक्तान र परी तामाङ पक्राउ परेका हुन् । उ नीहरुले फुलचोकी मिडिया हाउस प्रा‌लिको नामबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्थे । प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले पक्राउ परेकाहरुलाई साईबर अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी भएको बताए । पुरा पढौ
नत्र फेसबुक र ट्वीटर नेपालमा बन्द
सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए बन्द गरिने स्पष्ट गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने बताए । संसदीय मामिला पत्रकार समाजले संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री बाँसकोटाले दर्ता नगरिएको सामाजिक सञ्जालबाट नगरिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षालाई चुनौती दिने काम भए कारबाही गरिने स्पष्ट गरे । उनले विधेयक सूचना प्रविधिलाई नियन्त्रणका लागि नभई… पुरा पढौ
क्यान इन्फोटेक सकियो
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघ कास्की शाखाद्वारा आयोजित भायनेट क्यान इन्फोटेक–२०१९ सकिएको छ । फागुन २० गते सुरु भएको मेला शनिबार गण्डकी प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले समापन गरे । उनले समृद्धिका लागि प्रविधि र दक्ष जनशक्ति अपरिहार्य भएको बताए । दक्ष जनशक्ति विदेश पलायनलाई रोक्दै समृद्धि र रोजगारी हासिल गर्ने बाटोमा गण्डकी सरकार लागेको बताए । सर्वसाधारणलाई नयाँ प्रविधि र उत्पादनबारे बुझाउन मेला सफल भएको… पुरा पढौ